Nintendo Switch ဂိမ်းစက် သန်း ၂၀ နီးပါး ရောင်းချခဲ့ရ
Nintendo ဟာ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့ ပထမသုံးလပတ် ဝင်ငွေအစီရင်ခံစာကို Switch ရောင်းချရတဲ့ စာရင်းနဲ့အတူ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်အထိ Switch ဂိမ်းစက် ၁၉.၆၇ သန်း ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Nintendo ဟာ ၂၀၁၈ ဧပြီလကနေ ၂၀၁၉ မတ်လကုန်အထိ အလုံးရေ သန်း ၂၀ ရောင်းချရဖို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သုံးလအကြာမှာ အလုံးရေ ၁.၈၈ သန်းသာ ရောင်းချထားရပါတယ်။ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် ရောင်းအား အနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့ပေမယ့် အားလပ်ရက်ရာသီနဲ့အတူ အသစ်ဖြန့်ချိမယ့် Super Smash Bros. Ultimate နဲ့ Pokemon: Let’s Go ဂိမ်းနှစ်ခုတို့က ကုမ္ပဏီအတွက် အလုပ်အရှုပ်ဆုံးအချိန်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Nintendo ဟာ ဒီသုံးလပတ်မှာ ဝင်ငွေ ယန်း ၁၆၈ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၁.၅၁ ဘီလျံ) ရရှိခဲ့ပြီး အမြတ်ငွေ ယန်း ၃၀.၅ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၂၇၅ သန်း) ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက် ၈၈.၄ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၉.၁ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး တိုးတက်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Nintendo ဟာ လကျရှိဘဏ်ဍာရေးနှဈရဲ့ ပထမသုံးလပတျ ဝငျငှအေစီရငျခံစာကို Switch ရောငျးခရြတဲ့ စာရငျးနဲ့အတူ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ ဇှနျလ ၃၀ ရကျအထိ Switch ဂိမျးစကျ ၁၉.၆၇ သနျး ရောငျးခခြဲ့ရတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Nintendo ဟာ ၂၀၁၈ ဧပွီလကနေ ၂၀၁၉ မတျလကုနျအထိ အလုံးရေ သနျး ၂၀ ရောငျးခရြဖို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ သုံးလအကွာမှာ အလုံးရေ ၁.၈၈ သနျးသာ ရောငျးခထြားရပါတယျ။ ဒါဟာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈကထကျ ရောငျးအား အနညျးငယျကဆြငျးခဲ့ပမေယျ့ အားလပျရကျရာသီနဲ့အတူ အသဈဖွနျ့ခြိမယျ့ Super Smash Bros. Ultimate နဲ့ Pokemon: Let’s Go ဂိမျးနှဈခုတို့က ကုမ်ပဏီအတှကျ အလုပျအရှုပျဆုံးအခြိနျတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Nintendo ဟာ ဒီသုံးလပတျမှာ ဝငျငှေ ယနျး ၁၆၈ ဘီလြံ (ဒျေါလာ ၁.၅၁ ဘီလြံ) ရရှိခဲ့ပွီး အမွတျငှေ ယနျး ၃၀.၅ ဘီလြံ (ဒျေါလာ ၂၇၅ သနျး) ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈထကျ ၈၈.၄ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ ၉.၁ ရာခိုငျနှုနျး အသီးသီး တိုးတကျလာတာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။